Guuleystayaasha Tartanka Gabayada Hoyga Maansada 2021 oo la shaaciyay - Hoygamaansada
22 Nofeembar 2021 — Waxaa maanta si rasmi ah loogu dhawaaqay dadka ku guuleystay Tartanka Sanadlaha ee uu qabtay Hoyga Maansada Soomaaliyeed oo taageero ka helaya hay’adda Qaramada Middobay u Qaabilsan Horumarinta (UNDP).
Tartanka oo markii ugu horeysay sanadkan la qabtay ayaa u furnaa qof walba oo Af Soomaali wax ku qora si loo helo hal-abuurka ugu wanaagsan. Saddexda qeyb ee tartanka waxay kala ahaayeen Gabyaaga ugu Wanaagsan Sanadka, Gabadha ugu Gabayga Waangsan iyo Abwaanka ugu D’ada Yare Sanadka (ka yar 25 sano).
In ka badan 200 oo gabayo ayaa lagu soo diray website ka Hoyga Maansada, waxaa Garsoorayaal ka ahaa abwaanno isugu jira kuwo waaweyn iyo kuwo hadda soo kacaya oo ay ka mid yihiin Axmed Faarax Cali (Idaajaa), Cisman Cabdullaahi Guure, Maxamud Xaaji Maxamed (Tarash), Caasha Maxamud Yuusuf (Caasha-luul) iyo Xawa Jaamac Cabdi.
Qeybta koowaad ee Gabyaaga ugu Wanaagsan Sanadka waxaa ku guuleystay Mursal Daahir Caynte oo gabaygiisu ku saabsanaa gobannimada iyo gumeysiga. Qeybta Gabadha ugu Gabayga Wanaagsan waxaa ku guuleystay Raxma Xuseen Huriye oo gabaygeeda kaga hadashay midnimada, dadkana uga digtay halista ka dhalan karta marki ay bulshadu ka tagto dhaqankeeda iyo qiyamkeeda. Abwaanka ugu Da’da Yar
Sanadka waxaa ku guuleystay Mubaarik Yuusuf Dheeg oo gabaygiisu ku saabsanaa muhimadda ay leedahay xushmadda iyo naxariista.
“Sharaf bay ii tahay in aan ku guuleysto abaalmarinta ugu sarreysa ee Tartanka Gabayada Hoyga Maansada Sanadka,” ayuu yiri Mursal. “Waxaan marka hore u mahadcelinayaa Eebe kadibna qabanqaabiyayaasha tartanka oo dhiiragalin u sameeyay abwaannada da’da yar iyo sida ay u ilaalinayaan dhaqanka Soomaalida. Waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa hay’adda UNDP oo taageertay barnaamijkan. Waxey igu dhiiragalisay inaan sii wado curinta gabayga,”
“Marka hore Alle ayaa mahad leh, marka xigtana bahda Hoyga Maansada howsha culus oo ay qabteen,” ayey tiri Raxma Xuseen Huriye. “Runtii aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ku guuleysto abaalmarinta qeybta haweenka”
“Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ku guuleysto qeybta dhalinyarada.Waa riyo ii rumowday,” ayuu yiri Mubaarik Yuusuf Dheeg. “Waxaan u mahadcelinayaa qabanqaabiyayaasha iyo garsooorayaasha shaqada culus oo ay qabteeen si barnaamijkan looga dhabeeyo,”
“Badanaa waxaa Soomaaliya loo yaqaannaa dalkii abwaannada, aniga taasi waxay iiga dhigantahay inaan nahay bulsho xikmad badan oo maan fayow. Xaqiiqadaas ayey ka tarjumayaan dadkii ku guuleystay tartanka Gabayada sanadkan,” ayey tiri Xaawa Jaamac Cabdi oo ah gabyaa aad loo yaqaanno, kana tirsanayd garsoorayaasha tartanka sanadkan.
Xafladda abaalmarinta waxay maanta ka dhacday hoteelka Jazeera ee ku yaalla magaalada Muqdisho. Waxaa lagu soo bandhigay gabayadii ku guuleystay iyo khudbado ay soo jeediyeen dad magac ku leh suugaanta Soomaalida.
Tartanka wuxuu ka mid yahay mashruucyada ugu dambeeyay oo uu hirgaliyay Hoyga Maansada Soomaaliyeed oo taageero ka helaya hay’adda UNDP, si loo horumariyo suugaanta Soomaalida, nabadda iyo xuquuqda haweenka.
Horraantii sannadkaan ayaa la soo bandhigay bogga internetka ee Hoyga Maansada (www.hoygamaansada.com) Bogga internetku wuxuu kaydiyaa gabayadii hore iyo kuwo cusub oo ay tiriyeen abwaanada jiilka cusub. Sido kale, waa bar lagu daabaco warar la xiriira gabayada, laguna soo bandhigo maqaallo, wareysiyo, bandhigyo islamarkaana aqoon laga kororsado. Hoyga Maansadu wuxuu qabanayaa munaasabado gaar ah wuxuuna shaqo gelinayaa abwaanada si ay u soo qoraan gabayo cusub oo loogu qabto bandhigyo iyo aqoon is-weydaarsiyo dhanka dhaqanka ah.
“Haweenka abwaanada ah waxay taariikh dheer ku leeyihiin inay gabayga u adeegsadaan difaaca xuquuqdooda iyo tan muwadiniinta kale, iyagoo xitaa wajahaya caqabado waaweyn,” ayey tiri Maha Abusamra, oo ah sarkaal u xilsaaran qeybta jinsiga ee hay’adda UNDP. “Waan ku faraxsannahay inaan taageerno abwaannada Raxma oo kale inay hal-abuurkooda uu meel dheer gaaro,”
Wixii faafaahin ah, kala xiriir
Hoyga Maansada Soomaaliyeed: Hoygamaansada@gmail.com / +252 61 928 8867
Hay’adda UNDP: communications.so.undp.org / +252 61 412 5046
Nagala soco: Twitter: @hoygamaansada | Facebook: @hoygamaansada
Gabayada tartanka sanadkan ku guuleystay oo dhameystiran iyo sawirrada dadka ku guuleystay dhamaan halkan ayaad kala dagi kartaan: https://www.dropbox.com/sh/cbg7s4rhsjnp4i7/AACvEJxUQKtY3-iqzIJaE4oia?dl=0
Hoyga Maansada Soomaaliyeed waa barnaamij lagu kaydiyo laguna horumariyo gabayada iyo suugaanta Soomaalida. Waxaa la daahfuray sannadka 2021. Bogga internetka https://www.hoygamaansada.com/ waxaa lagu kaydiyaa gabayada Soomaalida, waxaana lagu qabtaa Tartanka Gabayada ee Sannadlaha.
Hay’adda Qaramada Midoobay u Qaabilsan Horumarinta (UNDP) waxay ka shaqeysaa 170 dal si ay u cirib-tirto saboolnimada oo wax uga qabato sinnaan la’aanta. Waxyaabaha aan dalalka ka caawinno waxaa ka mid ah diyaarinta qorshayaasha, xirfadaha hoggaaminta, dhiirrigelinta wadashaqaynta, kobcintas hay’adaha dawladda iyo xoojinta dhabar-adaygga si loo gaaro Yoolasha Horumar Waara. Shaqadayadu waxay u badan tahay saddex qeybood oo kala ah; gaaritaanka horumar waara, maamul wanaagga iyo nabadeynta, iyo sidii loogu dhabaradaygi lahaa isbeddelka cimilada iyo musiibooyinka. www.so.undp.org.
Poet of the Year, UNDP Woman Poet and Youth Poet judged by leading names in Somali literature from hundreds of entries
Links to the 2021 award-winning poems
The text of the 2021 Home of Somali Poetry award-winning poems can be downloaded here:
Mursal Dahir Caynte: https://www.hoygamaansada.com/poems/gobannimom/
Raxma Xuseen Huriye: https://www.hoygamaansada.com/poems/sooyaalr/
Mubarik Yuusuf Dheeg: https://www.hoygamaansada.com/poems/fall/